Hume City Council - Nala soo xiriir
You are here : Home > Soomaali > Nala soo xiriir
Waxaan leenahay saddex xarumood oo adeega macaamiisha ah, oo ku yaal Broadmeadows, Sunbury iyo Craigieburn. Waxay furan yihiin Isniinta ilaa Jimcaha laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo (Lacag qabtaha 8:15 subaxnimo - 5:00 galabnimo).
Fadlan ogow: dhammaan xafiisyadeenu way xiran yihiin fasaxyada dadweynaha.
Shaqaalaheena adeega macaamiisha ayaa kugu caawin kara macluumaadka ku saabsan adeegyo fara badan oo Goluhu leeyahay, laga bilaabo heerka lacagta goobaha cayaaraha laga qaado, diiwaangelinta xayawaanka la korsado ilaa diiwaangelinta carruurta dugsiga ka hor, qashin ururinta ilaa macluumaadka madadaalada.
Waxaad naga soo wici kartaa 9205 2200 (24 saac).
Waxaad naga heli kartaa goobaha soo socda:
Humelink ( xiriirka luuqadaha ee golaha)
Goluhu wuxuu bixiyaa adeega turjumaada- Humelink - oo u ogolaanaya degenayaasha inay wacaan mid kasta oo ka mid ah ugu yaraan sagaal luuqadood oo bulsho oo kala duwan iyo inay ku helaan turjumaad qoraal ah qaybta macluumaadka ee ay doortaan oo bilaash ah.
Carabi 9697 9815
Assyrian 9679 9809
Turkish 9679 9822
Fiyatnaamiis 9679 9823
Greek 9679 9818
Talyaani 9679 9819
Ka eeg muuqaalka Humelink wakhtiga dambe ee aad hesho warqad.
Adeegyada degdega ah
AMBALAASTA, DAB DEMISKA, BOLIISKA 000
Adeega Degdega ah ee Gobolka (SES) 132 500 - duufaanada iyo daadadka
Lifeline (24 saac) 131 114 - taageerada dhibka
Taleefanka Tallada caafimaadka Ilmaha iyo Hooyada:13 2229
Xarunta Macluumaadka Sumaha 131 126
Crime Stoppers 1800 333 000 - soo sheeg dembi
Bixinta biilasha ama ganaaxyada
Waad bixin kartaa biilasha Golahaaga sida lacagta guryaha, diiwaangelinta xayawaanka la korsado, ogolaanshaha qorshaynta iyo Dhismaha ama ganaaxyada baakinda Golaha, mid kasta oo ka mid ah xarumaha adeega macaamiisha ee broadmeadows, Sunbury iyo Craigieburn inta u dhaxeysa saacadaha 8:15 subaxnimo ilaa 4:45 galabnimo isniinta ilaa Jimcaha.
Haddii aad leedahay guri, waxaad u baahan doontaa inaad lacag ka bixiso oo aad siiso Golaha Magaalada Hume. Lacag bixintaadu waa muhiim si Goluhu u hubiyo inuu bulshada u qabto adeegyada, barnaamijyada iyo tasiilaadka adiga iyo qoyskaagu aad u baahan tihiin.
Lacagta sannadkii waxay daboolaysaa xilliga laga bilaabo 1 Luulyo ilaa 30 Juun sannad kasta. Waxaa laga yaabaa in lacagta loo bixiyo si qaybqayb ah. Waxaa la bixiyaa 30 Sibteembar, 30 Nofeembar, 28 febaraayo iyo 31 Maajo sannad kasta. Lacagaha waxaa lagu sameyn karaa siyaalo lacag bixineed oo kala duwan, oo ay ka mid tahay taleefanka, adoo sii diraya, qof ahaan, Boosta Australiya, interneetka, BPAY ama Lacag bixinta tooska ah ee xisaabtaada bangiga.
Uma baahnin inaad guri yeelato ama dhul si aad u hesho adeegyada golaha.
Aan ogaano haddii ay jirto arin
Goluhu wuxuu dayactiraa wadooyinka xaafada, marshabiyootka, tuunbooyinka wasakhda qaada, meelaha la maro ee la wadaago wadiiqooyinka dib loo hagaajinayo ee Hume oo dhan. Waxaad noo soo sheegi kartaa haddii aad aragto wax dhib ah sida godad, wadooyin dilaacay ama godmey, mershabiyeedka dhinaciisa oo waxyeelaysan, calaamadaha waxyeelaysan, marshabiyeedka jajaban iyo dhirta kor ka soo laalaada. Fadlan naga soo waca 9205 2200.
Adeegyada qorsheynta iyo dhismaha
Goluhu wuxuu masuul ka yahay kontoroolida dhismayaasha ka socda magaaladeena. Haddii aad dooneysid inaad ku sameysid wax isbedel ah gurigaaga ama dhulka fadlan naga soo jeegaree anaga inaad heysato ogolaanshihii saxda ahaa, foomamka iyo ogolaanshooyinka. Aad ayey muhiim u tahay inaad tan sameyso haddii kale waxaa laga yaabaa in lagu ganaaxo.
Updated : 10:00 AM, 19 February 2013